Faahfaahinta Qarax geystay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faahfaahinta Qarax geystay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Muqdisho
Faahfaahinta Qarax geystay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Muqdisho
Qaraxaan oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho, waxaana qaraxa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa ayaa goobjoogayaal waxaa ay sheegeen in uu ahaa Miinada nooca dhulka lagtu Aaso, kaas oo lala eegtay Gaariga Xildhibaan hore ahna Siyaasi Caan ka ah muqdisho ee Muxudiin Xasan Afrax xilli uu marayay agagaarka Xarunta degmada Kaaraan gaar ahaan meel u dhow Garoonka Kubadda Cagta ee qoobdooro.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayan in qaraxa uu ku dhintay hal Askari laba kelan ay ku dhaawacmeen, iyada oo uusan la socon gaariga Xildhiban hore Muxudiin Xasan Afrax.
Magaalada muqdisho ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyada miino ee dhulka lagu Aaso ama kuwa Gawaarida lagu xiro, kuwaas oo inta badan lala beegsado dadka mas’uuliyiinta ah.
Maqaal horeDeg deg Qarax Goordhaw Muqdisho Ka dhacay .
Maqaal XigaWasiirka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad KGS oo ku dhawaaqday go’aan ku saabsan Ciyartooydii la dhaawacay